TOUCHPAD DIA TSY MANDEHA AMIN'NY WINDOWS 10 [VAHAOLANA] - MALEMY
Touchpad dia tsy mandeha amin'ny Windows 10 [VAHAOLANA]
Fix Touchpad dia tsy mandeha amin'ny Windows 10: Raha vao navaozina ho Windows 10 ianao dia mety hiatrika an'ity olana ity izay tsy iasana ny Touchpad ary tsy afaka mizaha na inona na inona ao amin'ny rafitrao. Olana mahasosotra ity satria mampanantena i Windows 10 fa hamaha ireo olana amin'ny kinova Windows teo aloha fa tsy hamorona azy ireo. Ny olana lehibe dia toa ny fifandiran'ny mpamily satria ny Window dia mety nanolo ny kinovan'ny mpamily teo aloha tamin'ny kinova nohavaozina. Raha fintinina, ny mpamily sasany dia mety nanjary tsy nifanaraka tamin'ity kinovan'ny Window ity ka noho izany dia namorona ilay olana izay tsy iasan'ny Touchpad.
Toa olana be dia be io ary ny an'ny mpampiasa dia nanandrana zavatra maro mba hamahana ny olana, saingy very maina izany ezaka rehetra izany satria mbola tsy misy ny vahaolana mandeha. Aza matahotra anefa fa eto ny troubleshooter mba hamahana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana noforoninay tsara izay toa mety amin'ny mpampiasa maro voakasik'izany mandraka ankehitriny. Ka raha tsy mandany fotoana isika dia ndao hojerentsika ny fomba tena Fix Touchpad dia tsy miasa ao amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny torolàlana momba ny famahana olana etsy ambany.
Fomba 1: Ampiasao ireo Fomba fanalahidy hijerena TouchPad
Fomba 2: Manaova Clean-Boot
Fomba 3: alao antoka fa efa eo ny Touchpad
Fomba 4: Velomy amin'ny Touchpad
Fomba 5: havaozy ny mpamily totozy amin'ny totozy Generic PS / 2
Fomba 6: Avereno ny mpamily Mouse
Fomba 7: Alefaso ny touchpad amin'ny fikirakirana BIOS
Fomba 8: manavao ny mpamily avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra
Na dia tsy Windows 10 aza ny touchpad dia mety te hitety Windows ianao amin'ny alàlan'ny kitendry, ka ireto misy bokotra hitsin-dàlana vitsivitsy izay hahamora ny fitetezana azy:
1.Mampiasà Windows Key hidirana amin'ny Start Menu.
2.Mampiasà Windows Key + X hanokatra Command Prompt, Control Panel, Device Manager sns.
3. Ampiasao ny bokotra arrow mba hijerena manodidina sy hisafidianana safidy hafa.
4.Mampiasà kiheba hamakivaky ireo zavatra samihafa ao amin'ilay rindrambaiko ary Ampidiro hisafidianana ilay rindrambaiko manokana na hanokafana ny programa irina.
5.Mampiasà Alt + Tab mifantina eo anelanelan'ny varavarankely misokatra isan-karazany.
Andramo ihany koa ny mampiasa USB Mouse raha mikatona na mihamangatsiaka ny kursor ny Trackpad anao ary jereo raha mandeha izany. Ampiasao ny USB Mouse mandra-pilamin'ny olana ary avy eo afaka miverina miverina mankamin'ny trackpad ianao.
Indraindray io olana io dia mety hitranga noho ny touchpad sembana ary mety hitranga izany noho ny tsy fetezana, ka hevitra tsara foana ny manamarina fa tsy izany no zava-misy eto. Ny solosaina finday samihafa dia samy manana ny fampifangaroana ahafahana manao / manafoana ny touchpad ohatra ao amin'ny laptop laptop-ko ny Fn + F3, ao amin'ny Lenovo dia Fn + F8 sns.
Amin'ny ankabeazan'ny solosaina finday dia ho hitanao ny fanamarihana na ny mariky ny touchpad amin'ny bokotra fiasa. Raha vantany vao hitanao fa tsindrio ilay fitambarana mba hahafahanao manafoana ny Touchpad izay tokony Fix Touchpad dia olana tsy mandeha.
Indraindray ny rindrambaiko antoko fahatelo dia mety mifanohitra amin'ny Mouse ary noho izany, mety hiaina Touchpad ianao fa tsy mandeha ny olana. Mba Fix Touchpad dia tsy mandeha amin'ny Windows 10 , Ianao dia mila manatanteraka baoty madio ao amin'ny PC-nao ary fantaro tsikelikely ilay olana.
Ny faritra eo an-toerana dia tsy manana fampifanarahana ip mety
1. Kitiho ny Windows Key + X ary avy eo misafidy Takelaka fikirakirana.
2.Click amin'ny Fitaovana sy feo tsindrio avy eo Safidy totozy na Dell Touchpad.
3.Ataovy antoka Ny toggle Touchpad On / Off dia napetraka amin'ny ON ao amin'ny Dell Touchpad ary kitiho ny fanovana.
4. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana.
1. Kitiho ny Windows Key + dia safidiko avy eo Fitaovana.
2. Safidio ny Mouse & Touchpad avy amin'ny menio ankavia ary avy eo tsindrio Safidy totozy fanampiny.
3. Ankehitriny mifamadiho amin'ny kiheba farany ao amin'ny Mouse Properties ny varavarankely ary ny an'ity tabilao ity dia miankina amin'ny mpanamboatra toa Fikirana fitaovana, Synaptika, na ELAN sns.
4. Manaraka, kitiho ny fitaovanao avy eo kitiho Alefaso
5. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana.
Tokony izany hamaha ny olana fa tsy mandeha ny Touchpad ao amin'ny Windows 10 fa raha mbola miaina ny olana amin'ny touchpad ianao dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
1. Tsindrio Windows Key + X dia safidio Mpitantana Fitaovana.
2.Expand Totozy sy fitaovana fanondro hafa.
3.Fidio ny Fitaovana totozy raha ny amiko dia Dell Touchpad ary tsindrio Enter raha hanokatra azy Fikandrana momba ny fananana.
4.Mifindra amin'ny Salan'ny mpamily ary tsindrio eo Fanavaozana ny mpamily.
esory ny app default ho an'ny karazana fisie
5. Ankehitriny mifidiana Mikaroha rindrambaiko momba ny rindrambaiko mpamily.
6. Manaraka, safidio Avelao aho haka ao amin'ny lisitry ny mpamily fitaovana amin'ny solosainako.
7.Select Mouse mifanentana PS / 2 avy amin'ny lisitra ary kitiho ny manaraka.
8.Aorian'ny fametrahana ny mpamily dia avereno atsangana ny PC-nao mba hitahiry ireo fanovana.
1. Tsindrio Windows Key + X dia safidio Takelaka fikirakirana.
2.In varavarankely mpitantana ny fitaovana, manitatra Totozy sy fitaovana fanondro hafa.
3. Safidio ny fitaovanao totozy ary kitiho ny Enter hanokatra fitaovana Properties.
4.Mamadiho ny kiheba mpamily ary safidio esory ary tsindrio Enter.
5.Raha mangataka fanamafisana izy dia safidio ny Eny.
6. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana.
7.Windows dia hametraka ho azy ireo mpamily default ho an'ny Mouse anao ary hanao Fix Touchpad dia olana tsy mandeha.
Ny touchpad dia tsy mandeha ny olana indraindray mety hitranga satria ny touchpad dia mety ho tapaka amin'ny BIOS. Raha te hanamboatra an'ity olana ity ianao dia mila mamela ny touchpad avy amin'ny BIOS. Atsaharo ny Winodws anao ary raha vantany vao miakatra ny Screen Boot dia kitiho F2 na F8 na DEL.
Manavao ny Mouse Drivers anao avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra toa manampy amin'ny famahana ny olana. Raha tsy azonao antoka ny momba ny mpanamboatra Touchpad anao dia mankanesa any amin'ny mpanamboatra PC anao ary sintomy ireo fanavaozana farany ho an'ny fitaovanao Touchpad. Indraindray ny fanavaozana ny Windows dia afaka manampy koa, ka alao antoka fa efa tsy misy daty ny Windows anao ary tsy misy fanavaozana miandry.
Amboary ny famerenana amin'ny laoniny ny solo-sainanao mba hametrahana loop loop vaovao ilaina
Ny rakitrao rehetra dia teo amin'ny toerana namelanao azy ireo
Amboary ny Windows 10 Mouse Freeze na olana mihitsoka
Atsaharo ny fampandrenesan'ny Windows Creators Update ao amin'ny Windows Update
Izay no nahombiazanao Fix Touchpad dia tsy mandeha amin'ny Windows 10 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Ny mpamily amd display dia nijanona tsy namaly intsony ary sitrana
Tsy miasa amin'ny solosaina i netflix
windows 10 fitaovana fanarenana tenimiafina maimaim-poana
ny windows dia tsy afaka mifandray amin'ny mpanonta. nolavina ny fidirana
adino ny wifi tenimiafina windows 10